Isikhumba ebusweni lihlolwe njalo yizici zangaphandle. Yiba Neqhaza Ukuwohloka esimweni sakhe izimo zezulu, ukusetshenziswa nsuku zonke izimonyo nemihlobiso, ekukhetheni okubi izimonyo, izinguquko njalo imizwelo. Konke lokhu nokuningi kuholela ukubukeka imibimbi, ukoma, noma, Ngakolunye uhlangothi, amafutha ngokweqile, ukuvuvukala esikhumbeni. Hlola izindlela ezahlukene umkhakha yezimonyo ukuxazulula izinkinga ezinjalo eziningi imithombo, isikhathi, futhi ngaso sonke isikhathi ucwaningo yimpumelelo. Ngenkathi Imfihlo yobuhle obungapheli kanye isikhumba impilo kweqiniso itholakala Imvelo uqobo lwayo.
Ukuze sibhekane ngokuphumelelayo nezinkinga ezihlukahlukene yezimonyo ngeke Jojoba uwoyela. Incazelo, ukubunjwa, izakhiwo ewusizo yemvelo "elixir wobuhle," uzothola kulesi sihloko.
Plant kusuka okuyinto kuveza abandayo ukuphokophela uwoyela Jojoba, ngokuthi Simmonds Chinese, nakuba kuleli zwe lase-Asia, ke asihlobene. Bush likhula Melika efomini zasendle ekhula. Etshalwayo eMexico, Egypt.
Ekhulwini XVIII, Jojoba bendawo ukungezwa ukudla, iphathwa emanceba abo, ubuhlungu esiswini, ukulunywa yizinambuzane, ubuthi, ukulethwa imithi ebulala izinzwa. AmaNdiya ithokoze liyindlela yokuqinisa izinwele.
Zihambi zaletha zokupheka kwemikhiqizo zokwelapha kanye yezimonyo eYurophu. Ngemva kwalokho, uwoyela Jojoba waqala ukuze ungeze imikhiqizo yayo abakhiqizi kwemikhiqizo yezimonyo owaziwa. Ngo Folk imithi, lokhu kusho ukuthi nakho kwaduma, sibonga Ukwakheka ukuphulukiswa. Okusanda ngokuvamile zisebenzisa amafutha Jojoba phezu imibimbi azungeze amehlo. Izibuyekezo usho kahle eliphezulu lezo zimali.
Ngokusho ukwakheka kanye nesakhiwo uwoyela Jojoba kufana spermaceti whale - ikhemikhali waxy ekuqaleni kwazo ezinye zezinhlanzi whale. It is kabanzi njengendlela base ngoba okhilimu kanye nezinye izimonyo. Kodwa ngemva ukungena force kokuvinjelwa whale izimonyo catch abakhiqizi baqala sifuna ngentshiseko spermaceti okunye futhi bathola kunjengoba ngesimo uwoyela Jojoba.
Namuhla, imikhiqizo eminingi yezimonyo ukusebenzisa into engokwemvelo, njengoba uwoyela has esiyingqayizivele ukuphulukiswa kwengoma. Ngakho, iqukethe okunamafutha acid esters, amino acid, amaprotheni (collagen-like), amavithamini, kuhlanganise ukugqugquzela okuzivuselela izinqubo Vitamin E. Zonke izinto ezingenhla kuyazuzisa izinqubo isikhumba ukuvuselelwa. Ngaphezu kwalokho, amafutha esikuthola kalula, lingena kuya izingqimba engezansi isikhumba ingeyona phezu ifilimu amafutha. Ngakho kubhekwe ukuthi uwoyela engcono imibimbi azungeze amehlo - ke lisuselwa imbewu ehlathini Simmonds.
Ngenxa Ukwakheka layo eliyingqayizivele, amafutha angenza izimanga futhi sibhekane ngokuphumelelayo ezihlukahlukene izinkinga zesikhumba ebusweni. Ngakho, ukusetshenziswa njalo izindlela nge ingxenye zemvelo kunomthelela:
ukungenelela kanye amafutha kwesikhumba;
ukususa uyaxebuka nezindawo avuvukele;
nokwehlisa induna kanye induna;
ekudambiseni izimpawu zezifo dermatological ahlukahlukene - psoriasis, dermatosis, eczema;
kokuqina wabuka ebusweni;
Ukuvikelwa imisebe ultraviolet, kanye nezinye izinto ezingezinhle zangaphandle isikhumba - izimonyo abandayo, umoya, eliphansi.
ukusetshenziswa njalo uwoyela Jojoba for ebusweni kuthuthukisa ibala futhi kususa lesikhumba.
Banikezwe izakhiwo uwoyela Jojoba, isetshenziswa kulezi zimo ezilandelayo:
amafutha ngokweqile, induna;
Jojoba esetshenziswa imibimbi azungeze amehlo;
ekwelapheni izifo zesikhumba ;
emva ukususwa uboya obungathandeki ebusweni ukuvimbela nesenzakalo yokucasuka nokuvuvukala;
ukuba asivikele ezizihluphayo zangaphandle;
rejuvenate isikhumba futhi umswakama walo, ukunciphisa imibimbi.
Ngaphandle kwalokho, uwoyela Jojoba iqukethe eziningi izakhi, futhi unezinye izinzuzo:
Amafutha, abenziwe isithelo ehlathini Simmonds, hypoallergenic. Amathuba yimuphi komzimba emva ukusetshenziswa kwemikhiqizo yezimonyo equkethe Jojoba lincane. Izindlela ezinjalo ngokuvamile ngesisekelo izimonyo izingane. Nakuba ukusetshenziswa kwalo ngefomu okumsulwa endaweni enkulu Estheticians isikhumba namanje hhayi Kunconywa.
esikuthola kalula, engena phakathi ephansi izingqimba isikhumba. Ngakho izakhi fed izingqimba ehlukahlukene, yokukhulisa izwi umphumela omuhle ukusetshenziswa zindlela.
Amafutha olumelana namachibi, njengoba wax abazalwa ngaphezulu noma amafutha. Ngakho-ke akusho ziwohloka isikhathi eside. Uma wengeza amafutha ezitolo yezimonyo ethemini leyengcile luyanda kakhulu.
Ayikho Izimo. Njengoba kushiwo ngenhla, ngokuvamile sisetshenziswa ingane okhilimu kanye amashampu. Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisa ezimonyweni zabesifazane abakhulelwe nabancelisayo uwoyela Jojoba yezimonyo. Izibuyekezo Umthengi uqinisekisa ezingeni eziphakeme zokulondeka of enjalo engokwemvelo.
Indlela ukuyisebenzisela ebusweni?
Ngo Cosmetology uwoyela Jojoba kabanzi njengenhlangano okufakiwe kuze okhilimu kanye nezinye izindlela ukuze ubuso. Vele ungeze izimonyo zakho ozithandayo ezimbalwa amathonsi uwoyela uthole umphumelo esiphezulu. Ngakho, 10 g we ukhilimu edingekayo 15 ml amafutha.
Lapho yisihlungu noma awe kuvela uyaxebuka ku endaweni encane isikhumba singasetshenziswa nge isiponji noma ukotini swab ngqo ezilimele ingxenye undiluted uwoyela Jojoba.
Ngokuphumelelayo Jojoba lwamafutha imibimbi ebusweni bakho? Izibuyekezo Iningi ibonisa ukusebenza eliphezulu nokugcinwa nsuku zonke: emafutheni Jojoba, pre-gu a okugeza amanzi esikhungweni isilinganiso 1: 1 nge-alimondi, peach noma umnqumo isiyaluyalu 2 amathonsi rose uwoyela, camomile, sandalwood. isixha okunjalo esters ingasetshenziswa njengendlela nsuku zonke noma elangeni ngoba isicelo ubuso.
Kodwa iningi uwoyela Jojoba asetshenziswe ekukhiqizeni buso yasekhaya, licindezele kanye lotions for ebusweni. With zokupheka imikhiqizo efana yezimonyo ingatholakala ngezansi.
Jojoba Face: ukubuyekezwa kanye zokupheka buso
Ukuze ukuxazulula inkinga ethile ngesikhumba ngosizo uwoyela Jojoba, kubalulekile ukuze ikhulise main isithako nezinye amafutha abalulekile kanye nemikhiqizo okunomsoco Vitamin. Sinikeza izindlela ezimbalwa, ukubuyekezwa zazo ezimweni eziningi ezinhle. I contraindication kuphela zindlela ukunakekelwa isici esiyingqayizivele kufakwe izithako.
Tonic imaski ikhukhamba, ukwatapheya uwoyela Jojoba
Ukuze kulungiswe buso aqabulayo kufanele kahle exubile ebhodweni isipuni ibhotela, ikhukhamba oqoshiwe ukwatapheya uginindela. Sebenzisa njenganoma iyiphi enye imaski yezimonyo. Le nqubo ngokuphelele moisturizes isikhumba, imvundo nge amavithamini, unciphise ezimbotsheni nokususa izinto eziqukethwe fat ngokweqile, uvuselele ubuso.
Ukuze wehlise imibimbi ezijulile emabunzini imaskhi ukhilimu kufanelekile, ubumba yezimonyo namafutha Jojoba. Ukuze ukukhiqizwa kwayo kudingeka uhlanganise eyodwa inkomishi ukhilimu omuncu, isipuni ngobumba isipuni samafutha. Gcina ebusweni kokuba ayiphulukise.
imaski acidosis for isikhumba oily
Ngo wezipuni ezimbili ezinkulu ubisi olufudumele, kuzomele ungeze 15 ml amafutha Jojoba. Cebisa ingxube kufanele ngokungeza 2 amathonsi uwoyela clove, itiye esihlahleni futhi geranium. Oku-cut gauze isifonyo nge imigodi amehlo, ikhala nomlomo. Moisten ukulungele Indwangu ayehlala kuwo lapho ekuleso ingxube ubisi, ziyasebenza ebusweni. Leli thuluzi kuzosiza ekudambiseni ukuvuvukala, hlanza futhi unciphise ikhule ezimbotsheni, ukunciphisa oiliness kwesikhumba.
Ngendlela efanayo esetshenziswa Jojoba imibimbi azungeze amehlo. Izibuyekezo ubisi cindezela nje ngenxa yamakhono: ukunciphisa isibalo imibimbi encane zinyamalale imibuthano futhi izikhwama ngaphansi kwamehlo. Kufanele kube ku ingxube ubisi ukushonisa izipanji wembatha zamabhodlela. Hashaza off akudingekile. Vele ukususa asalile izicubu izindlela.
Ukuzifihla nge ephakamisa umphumela
Ukwandisa kuyaqina kwesikhumba, qinisa wabuka ebusweni, ukunciphisa imibimbi, lesikhumba, ngcono ukubonakala uju imaski ngamafutha Jojoba. Ukuze ukukhiqizwa kwayo kudingeka ancibilike isipuni uju kanye isipuni ibhotela. Khona-ke, i-selehlile isiyaluyalu mass 1 ngesiswebhu inkukhu neqanda isikhuphasha kanye isipuni enkulu kalamula.
uwoyela Jojoba okunakekela nsuku zonke
buso Ungadliwa lamafutha Jojoba isikhumba, kukhona ezihlukahlukene iso. Ezinye asetshenziselwa ukunakekelwa nsuku zonke, kuyilapho ezinye abe liphinyiselwe isinyathelo okukhulu, ngakho kumele kusetshenziswe kungekho izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ngesonto. Lezi amathuluzi asiza ukubhekana imibimbi ngcono isimo ebucayi isikhumba elincanyana kule ubuso esifundeni, ukuqeda puffiness, ukuvuvukala kanye neso ukukhathala.
Ukuze isikhumba nsuku zonke emhlabeni iso esebenzisa amafutha Jojoba, buhlanjululwe 1: 2 nanoma yimuphi izithelo itshe amafutha: zamapetshisi, alimondi, amagilebhisi, ibhilikotsi. Hlanganisa kudingekile imanzise ichopho iringi umunwe kanye nokunyakaza baqhutshwa ukusisebenzisa ezizungeze amehlo.
Leli thuluzi kuyinto zokuvimbela ephumelelayo ukubukeka imibimbi futhi "izinyawo likhale sika", kanye tindilinga amnyama futhi izikhwama ngaphansi kwamehlo.
labagula kakhulu isikhumba ezizungeze amehlo
isicelo ngempumelelo uwoyela Jojoba phezu imibimbi azungeze amehlo. Izibuyekezo ngemboni izimonyo, kanye buso yasendlini futhi izicelo equkethe izingxenye zemvelo, abonisa ukuthi amafutha yokubhekana ngokuphumelela nge imibimbi emihle, "izinyawo likhale sika".
Nciphisa imibimbi ekhona amancane azungeze amehlo ukusiza leresiphi: e isipuni samafutha udinga ukwengeza iconsi ezifana amafutha: rose, e-sandalwood, peppermint, e-lavender. Sebenzisa umkhiqizo oludingayo kudingekile massage ukunyakaza kanye ngesonto.
Yokuhlanzeka lipstick yemvelo
Lapho ohangulayo nesomiso, isithwathwa uqine imimoya abathintekayo hhayi kuphela isikhumba ebusweni, kodwa futhi izindebe. Bona crack, izinhlayiya zeqhwa. Okunjalo isimo akusona kuphela ebukekayo, kodwa futhi kubuhlungu kakhulu. C kalula ukubhekana nale nkinga, kanye ukuvimbela ivela khona nge yemvelo sanitary lipstick based uwoyela Jojoba.
Ukuze womshini mathuluzi kudingeka ancibilike 2 amathisipuni ngengcina yezinyosi namafutha Jojoba kanye. Ukwakheka umphumela ngesidingo sokwenezela 5 amathonsi amafutha ezahlukene ezibalulekile ezifana chamomile noma e-lavender. Ingxube elachithwa efolomeni. ingasetshenziswa ekhaya, isib, ebanzi noma cocktail utshani cap lipstick, iyiphi pre-agcotshisiwe ngamafutha. Shiya esiqandisini kuze solidification ephelele. ikhambi lemvelo lip ukunakekelwa kwenziwe!
Izibuyekezo lamafutha Jojoba
Kunzima ukuthola izibuyekezo engemihle mayelana uwoyela Jojoba. Kuyinto efanelekayo zonke izinhlobo isikhumba kanye hypoallergenic, okusho ukuthi iningi labantu kuyindlela ukusiza babhekane nezinkinga ezahlukene kwesikhumba. Ngokuphumelelayo Jojoba imibimbi azungeze amehlo. Izibuyekezo Umthengi ekushoyo ukululama ngokushesha elomile, walahlekelwa isikhumba kuyaqina, ukunciphisa imibimbi. Inani eliphansi komkhiqizo isisusa ezengeziwe ukusetshenziswa ukulungiselela yezimonyo ezinjalo zemvelo yemvelo ekhaya.
Kusukela sihloko, ozifundile yini Jojoba izakhiwo ewusizo, izindlela kanye izibuyekezo mayelana lo mkhiqizo wemvelo yezimonyo. Ingabe kuyazuzisa ke ukuzama esikhunjeni sakho siqu - isinqumo esakho. Ngaphambi ukusebenzisa, uthintane beautician yakho professional futhi ufunde mayelana izici isikhumba sakho. Lapho zisetshenziswa kahle, uwoyela Jojoba kuyoba kuwe ukutholakala yangempela ukunakekelwa umzimba wayo siqu.
U-Oliver Cromwell: Biography of umkhuzi webutho. Imiphumela yomlando we Protectorate of Cromwell
Kwabonakala izimoto ezinkulu zamasosha "Leopard" isimangalo ekuholeni emhlabeni